प्रवचनले मन्त्रमुग्ध, रुपले लठ्याउने सबैको मनमा बसेकी साध्वी जयाका को हुन् ? यिनको रहस्य बारे जान्नुहोस् – Classic Khabar
प्रवचनले मन्त्रमुग्ध, रुपले लठ्याउने सबैको मनमा बसेकी साध्वी जयाका को हुन् ? यिनको रहस्य बारे जान्नुहोस्
July 29, 2021 90
साध्वी जया किशोरीको प्रवचन सुन्दा मन्त्रमुग्ध नहुने र रुपमा नलठ्ठिने सायदै काम मानिस होलान् । भारतमा मात्र हैन नेपालमा समेत उनका प्रवचनहरु सामाजिक सञ्जालहरुमा जो कोहीले सेयर गरिरहेका भेटिन्छन् । यसैले हामी उनै सबैको मनमा बसेकी साध्वी जया को हुन् ?
भन्ने जो कोहीको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै छौ । मात्र ७ बर्षको धेरै कलिलो उमेरमा अध्यात्मको मार्गमा जया सामेल हुन थालिन् । जया किशोरी मुख्यतया उनका कथाहरु र भजनहरुको लेखन र बाचनका लागी परिचित छिन् । साथै प्रवचनबाटपनि सबैलाई लठ्याएकी एक पात्र हुन् । जया किशोरीका धेरै भजनहरू करोडौ पटक हेरिएका सूचिमा परेका छन् ।
जया किशोरी भारतको प्रसिद्ध कथाकारहरू मध्ये एक हुन्। उनका कथाहरू बाहेक, उनी मोटिभेशनल स्पीचका लागि पनि परिचित छन् । यो मात्र होईन, करोडौं मानिस उनको मीठो आवाजका कारण पागल छन्। त्यसकारण उनको भजनले यूट्यूबमा करोडौ दर्शकहरु सजिलै प्राप्त गर्दछ। जया भगवान कृष्णकी भक्तिनी हुन् । उनले श्री कृष्णलाई समर्पित धेरै भक्ति गीतहरू पनि गाएकी छन्। जया किशोरीसँग सम्बन्धित केहि रोचक जानकारी जान्नुहोस् ।
किशोरीको आधिकारिक वेबसाइटबाट प्राप्त जानकारी अनुसार, उनको जन्म जुलाई १३, सन् १९९५ मा कोलकातामा भएको थियो। उनको बुबाको नाम शिवशंकर शर्मा र आमाको नाम सोनिया शर्मा हो। जया किशोरी ७ बर्षको धेरै कलिलो उमेरमा अध्यात्मको मार्गमा सामेल हुन थालेकी हुन् ।
जया किशोरी मुख्य रूपमा उनका कथा लेखनका लागि परिचित छन् । उनले कथा लेखन र बाचनबाट आफ्ना अनुयायीहरूको दिमागमा गहिरो प्रभाव जमाएकी छिन् । उनले श्रीमद् भागवत कथा र नानी बाई रो मायरामा आधारित ३५० भन्दा बढी कथाहरू वाचन गरेर सबैलाई मन्त्रमुग्ध बनाएकी छिन् । जुन कथाहरु उनका मनपर्ने देवता भगवान कृष्णलाई समर्पित छन्।
जया किशोरीलाई बाल्यावस्थादेखि नै आध्यात्मिक क्षेत्रको गहिराइमा डुब्न सजिलो भयो किनकि उनी परम्परागत धार्मिक विश्वाससँग सम्बन्धित परिवारमा जन्मेकी थिइन। त्यो भनेको बाल्यकालदेखि नै उनले आफ्नो परिवारमा भक्तिको वातावरण देखेका कारण आफु यो मार्गमा आउन सकेको बताउँदै आएकी छिन् ।
जानकारी अनुसार उनका हजुरबा हजुरआमा दानीले उनको आध्यात्मिक मार्ग सुदृढ पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए किनकि भगवान कृष्णका धेरै कथाहरू उनका हजुरबुबाले सुनाउँथे । त्यही कारण उनले बाल्यावस्थादेखि नै भजनहरू पूर्णतया कण्ठ गरिसकेकी थिइन् ।
जब हामी उनको भजनको बारेमा कुरा गर्छौं, त्यहाँ उनका धेरै प्रकारका भजनहरू छन् जसलाई प्रशंसा र मान्यता दिइन्छ। उनका प्रसिद्ध एल्बमका नामहरू शिव स्तोत्र, सुन्दरकाण्ड, मेरे कान्हा की, श्याम थारो खाटू प्यार, श्याम की दिवानी की हुन्।
गुगलमा उनको भजन संगै धेरै खोजहरु पाउन सकिन्छ । जानकारीका अनुसार, जय किशोरीले अहिलेसम्म विवाह गरेका छैनन्। तर मिडियालाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा उनले भनिन् कि उनी पनि सामान्य महिला जस्तै छिन्। समय आएपछि मपनि विवाह गर्नेछु ।
जया किशोरीका बुबाले बिभिन्न अन्तर्वार्तामा उनको विवाहको बारेमा बोलेका छन्। भनिन्छ कि जया किशोरीलाई प्रारम्भिक शिक्षा दिएका गुरु गोविन्दाराम मिश्रले उनलाई आशीर्वादका रूपमा किशोरीजी पदवी समेत दिएका छन् ।
जानकारीका अनुसार, जया किशोरीले उदयपुर राजस्थानको नारायण सेवा ट्रस्टलाई उनको कथाहरूबाट आएको चन्दा दान गर्छिन्। यो ट्रस्टबाट असक्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई मिथ्याबाट दान गरेर सहयोग पुर्‍याइन्छ।
यी ट्रस्टहरूले गरीब बच्चाहरूको लागि स्कूल र खानाको पनि हेरचाह गर्छन्। उनको आधिकारिक च्यानलपनि छ । लाखौं व्यक्ति उनको युबट्युब च्यानल र फेसबुकमा जोडिएका छन् ।
Prevसंगै बाच्ने संगै धर्ति छो’ड्ने भन्दै टिकटक बनाएका दाम्पत्यको एकै साथ मृत्यु
Nextशिल्पा शेट्टी बिबादित बनाएको प्रमुख ५ घटाना यस्ता छन जसले शिल्पालाई पुर्यायो निकै चर्चामा !
उपचार पछि घर फर्किरहेको दम्पतीको एक्कासी कसरी भए कर्णालीमा वेपत्ता ?